Waa kuwee Labada Magaalo ee la sheegay inuu dhawaan booqanayo madaxweyne Farmaajo? - Caasimada Online
Home Warar Waa kuwee Labada Magaalo ee la sheegay inuu dhawaan booqanayo madaxweyne Farmaajo?
Waa kuwee Labada Magaalo ee la sheegay inuu dhawaan booqanayo madaxweyne Farmaajo?
Muqdisho (Caasimada Online)- Warar aan la hubin ayaa sheegayo inuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaan safar KU tagi doono laba magaalo oo kamid ah Soomaaliya taasoo noqoneyso safarkii ugu horreeyey oo uu ku sameeyo gudaha Soomaaliya tan iyo markii uu noqday madaxweynaha Soomaaliya.
Wararkaas ayaa sheegayo inuu madaxweyne 19 Bishaan booqan doono magaalada Gaalkacyo oo ay isku hor fadhiyaan muddo badan ciidamo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Magaalada Gaalkacyo ayaa isku furantay habeenkii uu madaxweynaha noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay magaaladaas ka bilawdeyn banaanbaxyo waaweyn oo lagu taagerayo waxayna keentay inuu furmo jidkii xirnaa, inkastoo markii dambe uu dib u xirmay.
Markay sidaas dhacday madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu dib u heshiisiin rasmi ah ka sameyn doono magaalada Gaalkacyo waxaana la filayaa inuu safarkaan jawaab u yahay ballan-qaadkii uu sameeyay waxaana lagu wadaa inuu halkaas kula kulmo odayaal , siyaasiyiin iyo labada maamul si loo helo xal waaro.
Sidoo kale waxaa la filayaa inuu madaxeynaha booqdo Magaalada Cadaado ee xarunta Galmudug oo lagu wado inay halkaas ka dhacdo doorashada wuxuuna mas’uuliyiinta maamulkaas kala hadli doonaa sidii ay doorashada ugu dhici laheyd qaab xalaal ah oo loo wada jeedo iyo sidii maamulka Ahlu Sunna looga qeyb gelin lahaa maamulka cusub ee la dhisayo.
Safaradaan ayaa la filayaa inay imaadaan marka uu Ra’isulwasaaraha soo magacaabo golihiisa wasiirada isla markaasna ay ansixiyaan xubnaha Baarlamaanka.